Beddel midabka asalka ah: AutoCAD ama Microstation - Geofumadas
Janaayo, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Guud ahaan waxaan isticmaalnaa midab cad ama mid madow, oo badalaya waxqabadka joogtada ah ee sababaha muuqaalka. Tusaale ahaan waxaan arki doonaa sida loo sameeyo iyadoo leh AutoCAD iyo Microstation.
Iyadoo AutoCAD ka hor 2008
Waxaa lagu sameeyaa gudaha Qalabka> ikhtiyaarrada, haddii aad ku jirtid 3D mise codsi aan tusin miiska kor ku xusan, waxaad ku qori kartaa amarada gacanta Optionska dibna geli.
Gudaha Display isbedelka ayaa lagu sameeyaa badhanka Colors. Halkaa waxaad dooran kartaa midabka moodada, Layout, xulasho, IWM
Aad waxtar u leh muuqaalkii hore ee aad haysatid, inaad ubaahan tahay Microstation iyo fursadaha midab kale.
Iyadoo AutoCAD ka dib 2009
Iyada oo la Ribbon of AutoCAD 2009 iyo 2010, eeg in ay jiraan tas-hiilaad lagu helo amarrada. Kaliya ereyada ikhtiyaarka ah ayaa la qoray, waxayna noo sheegaysaa waxa ay tahay menuka, inta soo hartay waa isku mid.
Haddii ay dhacdo Microstation, waxaa lagu sameeyaa:
Halkaas ayaan ka dooranay guddiga bidix ee ikhtiyaarka ah Fiiri Doorashada
Haddii aan la dooran Astaanta madow -> Cadaan, waxaan lahaan doonaa asal madow, taas oo ah Default. Haddii kale waxay noqon doontaa caddaan.
Waxa kale oo aad dooran kartaa inaanad caddeyn, oo muujinaysa hoosta hoose ee lagu tilmaamayo fallaadha, labaduba midabka midabka shaqada iyo Layout (Qaabka Liiska).
Tilmaamahan waxaa guud ahaan lagu dabaqaa goobta shaqada, laakiin waxyaabaha ku jira Eegida waxaad dooran kartaa haddii aanu doonayno in aan ku heyno (madow) ama midabka midabaysan ee la isticmaalay. Dambe wuxuu ku khuseeyaa faylka shaqada, haddii aad rabto inaad guud ahaan soo baxdo, waa inaad ku sameysaa faylka abuurka (faylka abuurka).
Si arrintan loo sameeyo, riix geeska View, waana la dooranayaa Eeg Tusaalooyinka, ka dibna dooro background.
Tusaalahan waxaa lagu sameeyey Microstation V8i, kuwaas oo haysta daabacado ka hor XM waxay arki doonaan sanduuqyada xulashada (Fiiri liistada)
Post Previous«Previous Geoinformatics, daabacaadda ugu dambeysa 2009
Post Next Ma jiri doonto ArcGIS 9.4Next »
6 Jawaab in "Beddel midabka asalka ah: AutoCAD ama Microstation"
Mahadsanid aad u cad
royer isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay caawimaad aad u wanaagsan oo fudud
waxaad heysataa wakhti fiican aadna aad ugu mahadsantihiin caawimaad
ARIEL isagu wuxuu leeyahay:
Lucerito isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay, waad ku mahadsantihiin
Waxaan halkaas u isticmaali jiray
Daryeel, Ilaahay ha idiin barakeeyo
mahadnaq badani waxay ahayd waxa aan u baahnahay, bedelka taariikhda madow illaa buluug taas oo u roon ra'yiga